NSOGBU NA ỌRỤ NKE WINDOWS 10 ỌRỤ ỌRỤ - WINDOWS - 2019
Nsogbu na ọrụ nke Windows 10 ọrụ ọrụ (0xC004F034, November 2018)
N'ime ụbọchị abụọ gara aga, ọtụtụ ndị ọrụ nwere ikikere Windows 10, rụọ ọrụ site na iji ikikere dijitalụ ma ọ bụ OEM, na ụfọdụ ụfọdụ zụrụ Azụmahịa mkpọsa, chọpụtara na Windows 10 anaghị arụ ọrụ, ma na nkuku ihuenyo ozi ahụ bụ "Mee ọ rụọ ọrụ Windows. Ngalaba ngalaba ".
Na ntọala ntọala (Ntọala - Mmelite na Nche - Mmegharị), n'aka nke ya, a na-akọ na "Windows agaghị arụ ọrụ na ngwaọrụ a n'ihi na igodo ngwaahịa ị banyere adịghị adaba na profaịlụ ngwaike" na koodu ntinye koodu 0xC004F034.
Microsoft kwadoro nsogbu ahụ, a na-akọ na ọ kpatara nrụrụ oge na-arụ ọrụ nke sava ọrụ ọrụ Windows 10 na iche naanị mbipụta ọkachamara.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ọrụ ahụ nke funahụrụ ọrụ, n'oge ahụ, o doro anya, a edozi nsogbu ahụ: n'ọtụtụ ọnọdụ, ọ bụ ezuru na ntọala ntọala (Intanet ga-ejikọrọ) iji pịa "Troubleshoot" n'okpuru ozi njehie na Windows 10 ọzọ ga-arụ ọrụ.
Ọzọkwa, n'ọnọdụ ụfọdụ mgbe ị na-eji nsogbu, ị nwere ike ịnweta ozi na-egosi na ị nwere igodo maka Windows 10 Home, mana ị na-eji Windows 10 Ọkachamara - na nke a, ndị ọkachamara Microsoft na-atụ aro ịghara ime ihe ọ bụla ruo mgbe edozi nsogbu ahụ.
Otu isiokwu dị na kọntaktị Microsoft akwadora maka mbipụta ahụ dị na adreesị a: goo.gl/x1Nf3e